ग्यास स्टेशन चलाउन कति जति लाग्ला त अमेरिकामा? अनि कहाँबाट शुरु गर्ने त अमेरिकामा ग्यास स्टेशन तथा कन्भिनियन्स स्टोर? बिशेष चिरफार सहित तपाइहरुकै लागि।-सानुबाबु सिलवाल - Enepalese.com
ग्यास स्टेशन चलाउन कति जति लाग्ला त अमेरिकामा? अनि कहाँबाट शुरु गर्ने त अमेरिकामा ग्यास स्टेशन तथा कन्भिनियन्स स्टोर? बिशेष चिरफार सहित तपाइहरुकै लागि।-सानुबाबु सिलवाल
इनेप्लिज २०७३ चैत ३ गते १६:५० मा प्रकाशित
कलात्मक र प्रगतिशील सोचाइले ग्यास स्टेशन तथा स्टोरलाई नयाँ प्रगति र सफलताको मोडतिर उन्मुख गर्नेछ । आफू, लगानीकर्ता, राम्रा कर्मचारी, लोयल ग्राहकबीचको घनिष्ठता, धैर्यता र ब्यवहार नै ग्यास स्टेशनको सुन्दर विहानी हो ।